Magaalada Boorama oo maanta lagu toogtay Laba Sarkaal – STAR FM SOMALIA
Wararka laga helaaya Xarunta Gobolka Awdal Ee Magaalada Boorama, ayaa sheegaaya barqanimadii maanta in lagu toogtay laba ka mid ah Saraakiisha Ciidanka Militariga Somaliland.
Tani waxay ka dambeysay markii nin askari ihi uu rasaas ku furay Saraakiishaasi, oo magacyadoodu lagu kala sheegay G/Sare Xasan Caqli, Taliyaha Aagga Galbeed Ee Militariga Somaliland iyo Xidigle Faarax Caraale, oo Saraakiisha ka tirsanaa.
Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax), Gudoomiyaha Gobolka Awdal, ayaa xaqiijiyay in Taliyuhu uu weerarkaasi ku dhaawacmay, halka uu ku geeriyooday Xidigle Faarax Caraale.
Gudoomiyaha oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee BBC, ayaa sheegay in Taliyuhu uu si xun ugu dhaawacmay rasaastaasi, waxaana hadda lagu dabiibayaa Isbitaal Magaalada Boorama ku yaala, sida uu yiri.
Toogashadan oo ka dhacday Xerada Militariga Boorama, ayaa waxaa lagu guuleystay in gacanta lagu dhigo askarii toogashada gaystay, sida uu xaqiijiyay Gudoomiye Ramaax.
Muddooyinkii ugu dambeysay, ayaa waxaa Somaliland ku soo badanaysay dilalka ay gaysanayan Ciidamada Qalabka Sida Ee Somaliland.
Maxkamad Kutaalada Wadanka UK Oo Xabsi Daa’im Kuxukuntay Nin Somali ah oo dil ka geystay Ddalkaas